“Imbirai Jehovha rwiyo rutsva”
Jehovha, akanyatsokodzera kurumbidzwa (4)
Vanamwari vevanhu havana zvavanobatsira (5)
Namatai makapfeka zvishongo zvitsvene (9)
96 Imbirai Jehovha rwiyo rutsva.+ Imbirai Jehovha, imi nyika yese!+ 2 Imbirai Jehovha; rumbidzai zita rake. Zuva nezuva zivisai mashoko akanaka ekuponesa kwake.+ 3 Zivisai kukudzwa kwake pakati pemarudzi,Nemabasa ake anoshamisa pakati pevanhu vese.+ 4 Jehovha mukuru uye akanyatsokodzera kurumbidzwa. Anoshamisa kupfuura vamwe vanamwari vese. 5 Vanamwari vese vemamwe marudzi ndivanamwari vasina zvavanobatsira,+Asi Jehovha ndiye akasika denga.+ 6 Pamberi pake pane ukuru* nekubwinya;+Simba nerunako zviri munzvimbo yake tsvene.+ 7 Ipai Jehovha zvakamukodzera, imi mhuri dzemarudzi,Ipai Jehovha zvakakodzera kukudzwa kwake nesimba rake.+ 8 Ipai Jehovha kukudzwa kwakakodzera zita rake;+Uyai nechipo mupinde muzvivanze zvake. 9 Kotamirai* Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene;*Dederai pamberi pake, imi nyika yese! 10 Zivisai pakati pemarudzi kuti: “Jehovha ava Mambo!+ Nyika yakanyatsosimbiswa, zvekuti haigoni kubviswa pairi.* Achatonga marudzi zvakarurama.”*+ 11 Denga ngaripembere, uye nyika ngaifare;Gungwa ngaritinhire pamwe chete nezvese zvizere mariri;+ 12 Masango ngaapembere nemufaro nezvese zviri maari.+ Miti yese yemusango ngaishevedzerewo ichifara+ 13 Pamberi paJehovha, nekuti ari kuuya,*Ari kuuya kuzotonga nyika. Achatonga nyika nekururama+Uye achatonga marudzi nekutendeka kwake.+
^ Kana kuti “Achamiririra nyaya dzemarudzi zvakarurama.”